लकडाउनमा दुग्ध किसान: दैनिक एक करोड नोक्सान | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: २३ जेष्ठ, २०७७
२३ जेष्ठ, २०७७
खैरहनी नगरमा तीन पुल निर्माण
भरतपुर । लामो लकडाउनका मारमा चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानहरु पनि परेका छन् । लकडाउन भएको दिनदेखि नै किसानले दूधले मूल्य पाउन छोडेको हुन् । विगत दुई महिनादेखि किसानले बिक्री भएको दूधको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् ।
‘भात खाउँ कि थाल खाउँको अवस्था आइसक्यो न पूरा दूध बिक्री भएको छ, न बिकेको दूधको मूल्य नै पाएका छौँ’ जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालले भने, ‘७५ प्रतिशत दूधले मूल्य पाएको छैन, जम्मा २५ प्रतिशत दूधमात्र बिक्री भएको छ, त्यसको पनि पैसा पाइएको छैन, कसरी जीवन चलाउने ? के खुवाएर गाईबस्तु पाल्ने ?
दानाचोक्करको भाउ बढेको हुनाले किसान थप मारमा परेका उनी बताउँछन् । चितवनमा दुग्ध उत्पादक किसानले दैनिक एक करोड नोक्सान सहनुपरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘दूधले मूल्य नपाए पनि सडकमा पोखेका छैनौँ, यो धैर्य किसानले कहिलेसम्म देखाउने ? उनले चितवनमा उत्पादन भएको ७५ प्रतिशत दूधले मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै भने, ‘दुग्ध उत्पादक किसानलाई राहतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । नत्र किसानको परिवार भोकभोकै हुने अवस्था छ ।’
किसानले उत्पादन गरेको दूध सबै दुग्ध कम्पनीहरुले उठाएका छैनन् । केही दूध उठाए पनि किसानको गोजीमा पैसा परेको छैन ।
त्यसकारण दूध उत्पादनमा लागेका किसान संकटमा छन् । कतिपय स्थानमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाएको छैन । एकातिर बजार छैन, अर्कोतिर गाईभैँसीलाई खुवाउने दाना, चोक्कर र परालको समेत अभाव छ । कतिपय सहकारीले संकलन गरेको दूधलाई बजारभरि चहारेर ‘दूध आयो दूध आयो’ भन्दै हिँड्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सहकारी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
चितवन प्रशासनले अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरु बिहान १० देखि ४ बजेसम्म खुलाउने भनेपछि व्यवसायीहरु थप मारमा परेका छन् ।
‘दुग्ध सहकारीका केही दूध भरतपुर, नारायणगढ बजारमा जान्थ्यो, तर प्रशासनले १० देखि ४ बजेसम्म दूधका पसलहरु खुलाउने भनेपछि बिक्री हुने दूध पनि बिकेको छैन’ सचिव बगालेले भने, ‘दूधका पसलहरु त बिहान र बेलुका खोल्न आवश्यक छ, १० बजेपछि खोलेर के अर्थ ?’ उनले यस विषयमा प्रशासनसँग पटकपटक कुरा भएको जानकारी गराए ।
व्यावसायिक पशुपालक दुध उत्पादक कृषि समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरु लकडाउनका कारण बजारमा बेच्न नपाएर मारमा परेका बताउँछन् । ‘दूध बेचेर जीवन गुजार्नेहरुको अवस्था नाजुक भइसकेको छ, राज्यले यस विषयमा सोच्न जरूरी छ’ उनले भने, ‘किसानको दूध बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ ।’
चितवन जिल्लाभर दूध उत्पादन गर्ने १०८ सहकारी संघ रहेका छन् । करिब ४० हजार किसानले दैनिक डेढ लाख लिटरको हाराहारीमा दूध उत्पादन गर्छन् । यतिबेला २५ प्रतिशत दूधमात्र बिक्री भएको किसानहरु बताउँछन् ।
चितवन संकलन भएको दूध दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरीले काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडासम्म लैजान्छन् । लकडाउन सुरू भएपछि डेरीहरुले दूध लैजान कटौती गर्दै आएका छन् । जसका कारण दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले नियमित दूध उठाउन सकेका छैनन् ।